Maxkammada magaalada Milano oo Robinho ku xukuntay sagaal sano oo xabsi ah… (Ogow faah-faahinta kiiska lagu heysto xiddigii hore ee qaranka Brazil) – Gool FM
Maxkammada magaalada Milano oo Robinho ku xukuntay sagaal sano oo xabsi ah… (Ogow faah-faahinta kiiska lagu heysto xiddigii hore ee qaranka Brazil)
Haaruun March 10, 2021
(Milano) 10 Maarso 2021. Weeraryahankii hore ee kooxaha Real Madrid iyo AC Milan, Robinho , ayaa lagu xukumay xasi sagaal sano ah sida ay xaqiijisay Maxkamadda Racfaanka ee magaalada Milano (Milan Court of Appeal).
Robinho ayaa maxkamadda lasoo taagay bishii December kaddib markii lagu helay dambi kufsi ah oo uu kala qayb galay koox qas-wadayaal ama gaangiistarro.
Kufsiga ay kooxdan sameeyeen ayaa ka dhacay magaalada Milano ee dalka Taliyaaniga sanadkii 2013, waxaana dambiga lagu helay weeraryahankan iyo kooxdii falka kula jirtay sanadkii 2017.
Maxkamadda ayaa sheegtay inay Robinho ku caddaatay eedeynta dambiga kufsiga ah, isagoo xitaa bah dil iyo jir dil isugu daray gabadha dhibanaha ah oo markaas u dabaal dageysay sanad guuradeedii 23-aad sida ay warisay La Repubblica oo ah majalad kasoo baxda caasimadda Taliyaaniga ee Roma.
37-sano jirkan ayaa hadda heysta 45 maalmood oo uu racfaan kaga qaadan karo xukunka xabsiga ah ee ay ku ridday maxkamadda magaalada Milano isagoo la aaday racfaankiisa maxkamadda Supreme Court of Cassation oo ah maxkamadda ugu sarreysa ee racfaanka.
Weeraryahankii hore ee Milan ayaa lala xukumay saaxiibkiis Ricardo Falco.
Waa kuma xiddiga kaliya ee sida tooska ah ula soo xiriiray Lionel Messi si ay hal koox ugu wada ciyaaraan?
Iska ilow Real Madrid, David Alaba oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta